Farta Arooska | Hal-abuurka khadka tooska ah
Iris Gamen | 19/05/2022 22:00 | Fuentes
Qorshaynta mid ka mid ah maalmaha ugu muhiimsan noloshaada waxay noqon kartaa xoogaa walaac leh. Sababtan awgeed, laga bilaabo hal-abuurka onlaynka waxaan rabnaa inaan kaa caawino raadi qoraalka arooska saxda ah. Sida laga yaabo inaad dareentay, waxaa jira kumanaan farood oo la xidhiidha dhacdadan, lacag ama bilaash ah, iyo mid kasta oo leh qaab kale.
Ha ka werwerin tan, sababtoo ah gacanta ayaanu ku siinaynaa oo waxaanu kaa dhigi doonaa a xulashada qaar ka mid ah xarfaha ugu caansan ee aroosyada martiqaadyadaada, boodhadhka, liiska miiska, kaadhadhka mahadsanid, iwm.
Liiskan xarfaha arooska, waxaad ka heli doontaa dhammaan qaababka, xarfo casri ah, casri ah, duug, gacan-gacan, iwm. Marka laga soo tago in lagu baro farmo kala duwan, waxaanu kuu soo jeedin doonaa isku-dar qoraaleedyo kala duwan si aad ugu isticmaasho taageeradaada.
1 Farta Arooska ee lagu taliyay
1.5 Qoraalka rabitaannada
1.7 Wanderlust Warqadaha
1.9 Qoraalka Corneria
2 Isku-dhafka qoraalka ee aroosyada
2.1 Josephine iyo Times New Roman
2.2 Bevan iyo Baskerville
2.3 Montserrat iyo Cambria
Farta Arooska ee lagu taliyay
Qaybtan, waxaad ka heli doontaa a xulashada waxa anaga ah ayaa ah qaar ka mid ah xarfaha arooska ee loogu talinayaa isticmaalka. Qaarkood waa noocyo bilaash ah, marka la barbardhigo kuwa kale ee la bixiyo, laakiin dhaqaale ahaan la awoodi karo maalintaas gaarka ah.
Arooska wax walba waa la xisaabiyaa, ubaxa, goobta, menu, dharka, iwm. Laakiin haddii aan ka hadalno martiqaadyada arooska iyo naqshadaha kale ee waraaqaha, ma jiraan wax ka dambeeya. dhammaan waa muhiim. Warqadda la doortay ee lagu shaqeeyo, palette midabka, sawirada iyo gaar ahaan farta.
Waa aasaas, ogow sida loo doorto ma aha oo kaliya qoraalka, laakiin sidoo kale naqshadeynta iyo qaabka ku habboon sidaa darteed wax walba waa la habeeyey, si fudud loo fahmi karo, xogta muhiimka ahina way ka duwan tahay inta kale.
Nooc qoraal ah ku habboon aroosyada dibadda iyo deegaanka dabiiciga ah. Waxaa naqdiyay Coto Mendoza, Boho waa weji farriimo-garaaceed ah.
Kala xisaabtan afar miisaan oo kala duwan oo ay ku shaqeeyaan; Farta caadiga ah, geesinimada leh, faaligga ah iyo farta geesinimada leh. Saddex qoys ayaa sidoo kale la heli karaa; Script, Line iyo Sans Serif.
Farta casriga ah oo leh qaab jaceyl ah, gaar ahaan loogu tilmaamay naqshadaha la xiriira aroosyada, baabtiisyada ama wadaagga. Isla markaana taas jaceyl, xarrago leh oo qurux badan.
Waxaa ku jira faylashaada far waaweyn, xarfo yaryar, nambarayn, calaamadayn, iyo qaar calaamadaha iyo seedaha lagu daro martiqaadyadaada.
Xaaladdan oo kale, waxaan kuu keenaynaa a farta farta lagu fiiqo oo u ekaysiisay far-qoritaan. Hilda waxay leedahay qaab aan laga dareemi doonin naqshadaha arooskaaga maadaama ay muuqaal ahaan aad u soo jiidato.
keeni doona a taabashada shakhsi ahaaneed marka lagu daro, quruxda iyo quruxda naqshad kasta, maadaama ay si fiican ugu habboon tahay taageero kasta, taas oo ah, waxay ka shaqeysaa martiqaadyada, kaararka, xaashida liiska, iwm.
Taas uun baan odhan karnaa Isha waa cajiib, ma aha oo kaliya dhamaystirkeeda laakiin sidoo kale quruxdeeda. Waa far casri ah oo ku habboon naqshadaha aroosyada oo ka yara duwan waxa aan u barannay in aan aragno.
Waxa ay bixisaa oo kaliya xarfo xarfo waaweyn oo lagu shaqeeyo, iyo sidoo kale nambarada, calaamadaha xarakaynta, iyo ligatures xarrago leh oo siinaya muuqaal gaar ah si loo daabaco.
Ku darista quruxda naqshadaha arooskaaga waa suurtogal iyada oo ay ugu wacan tahay qaabkan. Waxaad ka heli doontaa noocyo kala duwan oo kala duwan walxaha qurxinta si ay ula shaqeeyaan oo u dhamaystiraan naqshadahaaga.
Waxaa dhiiri galiyay Habka Ingiriisiga sida lagu arki karo qaloocyadiisa quruxda badan, qaloocyada si fiican ugu shaqeeya cabbirrada waaweyn iyo kuwa yaryar labadaba.
Doorasho heer sare ah oo soo jiidasho leh, sida tusaale ahaan kor lagu arkay, waxoogaa jebiya qaabka caadiga ah ee loo isticmaalo naqshadaha arooska. Haddii aad raadinayso qoraal qoraal ah casri ah, dhiiranaan iyo waliba xarrago leh, Mistic waa doorashada guusha.
Waxa ku jira xarfo waaweyn iyo kuwo yar, lambaro, xarakayn, iyo xadhigyo iyo beddelaadyo kala duwan oo lagu daro naqshadahaaga. Martidaada afka u fur iyaga oo isticmaalaya qoraalkan cajiibka ah.
Haddii aad tahay lamaane raadinaya qaab qadiimi ah oo laxiriira farsamooyinka farshaxanka, waxaan kuu keenaynaa tan Qoraal farxad leh oo taxadar la'aan leh oo leh qaab calligraphic ku salaysan farsamada midabka biyaha.
Qoraal-qoraal ah oo soo jiidasho leh, oo leh muujinta walxaha muhiimka ah. Waxay si fiican u shaqeysaa ma aha oo kaliya in la muujiyo xogta, laakiin sidoo kale in la qoro weedho gaaban ama talo martidaada.
Waxaan kuu keenay doorasho kale xarrago leh, xarrago leh oo xarrago leh. Haddi mawduuca arooskaagu uu ku wareego saddexdan sifo, far-qoraalkani waa ka adiga.
Deluce, waxay soo bandhigaysaa xarfo xarfo waaweyn oo gaar ah oo isu keena a qaab casri ah oo kala duwan oo ka mid ah xarfaha wareegsan oo leh baafin is barbar dhig hoose ah iyo serifs geesinimo leh.
Qoraalka arooska, kaas oo saxa inta badan sanduuqyada si uu u cajabiyo martidaada maalintaada ugu xiisaha badan. Ku midee qaab fudud oo qurux badan, kaas oo u sahlaya akhrintiisa sidoo kalena aan ka warhayn dadka hortooda ku haysta.
Far free, buuxa, oo ay ku jiraan far waaweyn, far yar, nambarayn, xarakayn, iyo xuruuf gaar ah. Naqshadeeda waxaad ku arki kartaa xariiqyo siman iyo sida xarfaha kala duwani ay si fiican isugu yimaadaan.
Isku-dhafka qoraalka ee aroosyada
Isku-dhafka ah ee aad ka heli doonto qaybtan waxay si sax ah u shaqeeyaan naqshadaha la xidhiidha dabaaldegyada arooska. Intaa waxaa dheer, waxaan ku tusineynaa tusaalooyin cusub oo farta aan kor lagu xusin.
Josephine iyo Times New Roman
Isku darka Classic ee ku ciyaara nooca sans-serif iyo nooca serif. Xaaladdan oo kale, font Josefina waa nooc sans serif ah oo aan ku isticmaali doono ciwaannada ugu muhiimsan ee naqshadaha. Si kale haddii aan ka hadalno martiqaadka waxa aanu u adeegsan lahayn magacyada aroosyada iyo aroosadda iyo faahfaahinta halka lagu qabanayo xaflada.
Dhanka kale, Times New Roman, sida aynu wada ognahay, waa xarfo serif ah oo si fiican ugu habboon qoraallada aan hore u soo sheegnay. Labaduba waxay abuuraan a kala sareyn is-waafajisa iyada oo ay ugu wacan tahay farqiga u dhexeeya.
Bevan iyo Baskerville
Xaaladdan oo kale, waxaan kuu keenaynaa laba farood oo leh miisaan badan iyo joogitaanka oo si fiican isugu dara Qoraallada yaryar, iyaga oo aan meesha ka saarin sumcadda dhexdooda.
Bevan waa far dhumuc weyn leh, oo leh serif labajibbaaran oo aad u xoog badan. Haddii ay dhacdo in loo isticmaalo martiqaad, waxa loo isticmaali lahaa magacyada aroosadda iyo aroosadda. Dhanka kale, font-ka Baskerville ee nooca geesinimada leh, inta ka hartay xogta iyo taariikhda. Had iyo jeer raadso kala sareyn sax ah iyo qaabaynta si aan loogu tallaabsan oo ay u sahlanaato in la akhriyo.
Montserrat iyo Cambria
Una xoogaa isugeyn gaar ah sida aad arki karto. Nooca Montserrat waa xarfo joomatari oo casri ah oo si cajiib ah ugu shaqaynaysa naqshad kasta iyo weliba si ka sii badan oo ay la socoto far-qore serif ah sida Cambria.
Ku ciyaarista labadan farood, waxaad gaari doontaa isbarbardhig sare oo aad ku soo jiidato dareenka faahfaahin gaar ah. Ma aha laba far dhaqameed, laakiin tafatirahooda waxay ku maareeyaan in naqshadaha lagu isticmaalo ay soo baxaan.
Ku shaqaynta wejiyada ugu wanaagsan ee naqshadaha arooskaaga waa hab fiican oo lagu shakhsiyeeyo oo laga dhigo martiqaadyadaas, kaadhadhka mahadsanid, iyo alaabada kale ee waraaqaha gaarka ah.
Sidaad awoodo inaad ku akhrido daabacaadan, waxaanu samaynay ururin yar oo aan aaminsanahay inay yihiin xarfaha aasaasiga ah ee arooska ee ay tahay inaad ogaato. Waxaan rajeyneynaa inay ku dhiiri galiyaan, iyo in naqshadaha arooskaagu ay buuxiyaan dhammaan waxyaabaha aad filayso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » xarfaha arooska
Sida loo qaado sawir dhaqaaqa
Sida loo sawiro geedaha Procreate